SingularDTV စျေး - အွန်လိုင်း SNGLS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို SingularDTV (SNGLS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ SingularDTV (SNGLS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ SingularDTV ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $5 688 715.00
volume_24h_usd: $1 241 760.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ SingularDTV တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
SingularDTV များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SingularDTVSNGLS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0117SingularDTVSNGLS သို့ ယူရိုEUR€0.00991SingularDTVSNGLS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00894SingularDTVSNGLS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0107SingularDTVSNGLS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.105SingularDTVSNGLS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0738SingularDTVSNGLS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.259SingularDTVSNGLS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0436SingularDTVSNGLS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0155SingularDTVSNGLS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0164SingularDTVSNGLS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.26SingularDTVSNGLS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0906SingularDTVSNGLS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0628SingularDTVSNGLS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.876SingularDTVSNGLS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.97SingularDTVSNGLS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0161SingularDTVSNGLS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0179SingularDTVSNGLS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.364SingularDTVSNGLS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0813SingularDTVSNGLS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.25SingularDTVSNGLS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩13.88SingularDTVSNGLS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.53SingularDTVSNGLS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.858SingularDTVSNGLS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.321
SingularDTVSNGLS သို့ BitcoinBTC0.000001 SingularDTVSNGLS သို့ EthereumETH0.00003 SingularDTVSNGLS သို့ LitecoinLTC0.000215 SingularDTVSNGLS သို့ DigitalCashDASH0.000129 SingularDTVSNGLS သို့ MoneroXMR0.000131 SingularDTVSNGLS သို့ NxtNXT0.912 SingularDTVSNGLS သို့ Ethereum ClassicETC0.00172 SingularDTVSNGLS သို့ DogecoinDOGE3.37 SingularDTVSNGLS သို့ ZCashZEC0.000142 SingularDTVSNGLS သို့ BitsharesBTS0.36 SingularDTVSNGLS သို့ DigiByteDGB0.374 SingularDTVSNGLS သို့ RippleXRP0.0415 SingularDTVSNGLS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000403 SingularDTVSNGLS သို့ PeerCoinPPC0.0388 SingularDTVSNGLS သို့ CraigsCoinCRAIG5.33 SingularDTVSNGLS သို့ BitstakeXBS0.499 SingularDTVSNGLS သို့ PayCoinXPY0.204 SingularDTVSNGLS သို့ ProsperCoinPRC1.47 SingularDTVSNGLS သို့ YbCoinYBC0.000006 SingularDTVSNGLS သို့ DarkKushDANK3.75 SingularDTVSNGLS သို့ GiveCoinGIVE25.32 SingularDTVSNGLS သို့ KoboCoinKOBO2.66 SingularDTVSNGLS သို့ DarkTokenDT0.0108 SingularDTVSNGLS သို့ CETUS CoinCETI33.77
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 10:35:02 +0000.